Kala duwanaanshaha Shah Saadka ee Gaadiidka Ruushka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinKala duwanaanshaha Shah Saadka ee Gaadiidka Ruushka
27 / 01 / 2020 33 Mersin, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Warqad Hordhac ah, TURKEY
Kala duwanaanshaha Sah logistics ee Gaadiidka Ruushka
Iyada oo ay ugu wacan tahay goob ahaan juqraafi ahaan, Ruush, oo si gaar ah ugu tiirsan sahayda cunnada, ayaa siisa qaybo badan oo ka mid ah cuntada aasaasiga ah sida khudradda iyo khudradda cusub ee laga keenay waddankeenna. Ku dhawaad ​​waqti kasta oo sannadka ah in miraha iyo khudaarta xilli laga keeno dibadda iyo ku dhow yahay inuu labada dal ee bandhigi kharashka muhiim ah in arrintan la xiriira in ay noqon arrin hufan labada dalka Turkiga oo ku beegnaa suuqa ayaa noqday dayactirka xarunta sahayda.
Qaab dhismeedka xiriirka laba geesoodka ah ee dhawaanahan si weyn u kordhayay, markii aysan jirin shirkado gaadiid ku filan oo buuxiya dalabka dhoofinta, waxaa la isku dayayaa in si furan loogu xiro iyada oo la siinayo gawaarida taargooyinka alaabada shisheeyaha. Macnaha guud, inkasta oo shirkado badan oo gaadiid gaar ah ay khuseeyaan gawaarida taarikada ee Joorjiyaanka, kuma filna maaddaama ay la kulmaan caqabadaha qaar. Shirkaddayada Globalah Global Logistics waxay leedahay qaab ballaaran oo ku aaddan sahayda sahaminta taarikada gudaha iyo ta shisheeye labadaba Shirkadaha iibka ee Russia Waxay ku jirtaa booska shirkadda dhoofinta ugu raadin badan.
Shirkadeena, oo shaqooyin wax ku ool ah ka qabta dhammaan meelaha sida xamuulka xamuulka qaada oo wata gawaarida xamuulka qaada ee caadiga ah, safarada joogtada ah ee toddobaadlaha ah iyo adeegyada rarka qayb ahaan, gaadiidka xamuulka qaada, howlaha gaadiidka xamuulka iyo gaadiidka culus, dhoofinta dhammaan magaalooyinka Russia, gaar ahaan Moscow, dhammaan gobollada dalkeenna. Waxay si guul leh u qaadeysaa xamuulka xamuulka dhameystiran ee safarka.
Shirkaddeenna, oo fulisa howlo qabashada alaabooyin badan oo laga soo saaray waddankeenna oo loo dhoofiyo Ruushka, mashruucan ayaa ka hadlaya guusha ay ka gaadhay dhammaan mashaariicda ay saxiixday. Maraakiibta lagu diro Russia Şah Global Logistics, oo ka shaqeyneysa qaabdhismeedka 7/24 fahamka kooxda qalliinka ee khibradda leh, waxay sidoo kale fulin kartaa gadiidka alaabada laga soo dhoofiyo Russia si waddankeenna si hufan loogu helo. Shirkadeena, oo guud ahaan fulisa gadiidka gawaarida ee wadada ku saleysan adoo adeegsanaya wadada Georgia, waxay sii wadaysaa go'aankeeda iyada oo aan lagu xadgudbin mabaadii'da shaqada ee ay soo bandhigtay tan iyo markii ugu horreysay ee qaybta. Turkey-Russia asxaabta ay la shuqulkiisa in line logistics taasoo u waxyoonay Shah sidoo qanacsan macaamiisha Global Logistics qaba xaaladaha gaadiid ku haboon.
Contactah Xiriirka Saadka ee Caalamka
gaadiidka xamuulka frigodorse
hawlgallada maaraynta weelka
Maraakiibta lagu diro Russia
shirkadaha gaadiidka xamuulka qaada
line Turkey iyo Russia logistics